Krasnoyarsk मूल्यहरु, रेटिंग, yन्डेक्स मा समीक्षा होटल। साथीहरु
krasenoeर्स्कमा मूल्य र समीक्षाको साथ क्राइन्सोर्साकमा - क्वेमेडियाहरू बिना - / H2><< p> मध्य र पूर्वी साइबेरियाको ठूलो औद्योगिक, व्यवसाय र शैलीको केन्द्रले दैनिक ट्रेन स्टेशनहरू र हाम्रो देशका सबै क्षेत्रका हजारौं व्यक्तिहरूको एयरपोर्टमा दैनिक रूपमा लिन्छ। तसर्थ, यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि क्रासोसोर्साक होटेलमा विभिन्न तहहरूमा काम गर्दछ। तपाईं शंका गर्न सक्नुहुन्न: हिजोको स्कूलीबोले सजिलैसँग प्रवेश परीक्षाको समयमा सस्तो नम्बर फेला पार्न सक्दछ, र व्यापारीले धेरै थप सेवाहरूको साथ चयन गर्दछ।
स्थान र होटेलको स्थान र होटलहरू
कसरी एक कोठा जोडिएको कोठा बुक गर्ने?
+ H2> रेलवे स्टेशनको नजिकै
हिउँ उल्लू होटल Krasnoyarsk को अधिकार बैंकको बीचमा अवस्थित छ। सुविधाजनक यातायात जंक्शनले तपाईंलाई द्रुत शहर केन्द्रमा जान अनुमति दिन्छ, कार र रेलवे स्टेशनमा। पैदल दूरीमा यसेसीको एक सुरम्य तटबन्ध छ। टेलले विभिन्न कोटीहरूको 11 numbers संख्या समायोजित गर्न प्रस्ताव गर्दछ। एक रेस्टुरेन्ट कोठाहरू, एक सानो जिम, एक लौतिक पट्टी, दुई मदिरात सौन्दर्य "उल्लू ब्यूटी"। वायरलेस ईन्टरनेट पहुँच होटेल भर उपलब्ध छ।
आकर्षणहरू: सर्कस - 0.68 किलोमिटर, मध्य स्टेडियम - 0.8 km किलोमिटर खेल दरबार। I. rygin - 1.32 किलोमिटर, पलिश्ती - 1.933 किलोमिटर कला संग्रहालय। V. यूआर्योको - 2.02 किलोमिटर
HISTEL CHISTEL CHESTEL
1 Minutes मिनेट रेलवे स्टेशनबाट
नि: शुल्क पार्क (li>
तपाईं ठूला समूहहरू तल बस्न सक्नुहुनेछ
विभिन्न प्रकारहरू (अनुकूलन), पुरुषहरू, महिलाहरू, <
कोठा हेर्नुहोस्: प्रति दिन 550 350R बाट स्थानहरू
व्यापार यात्रुहरूको लागि सब भन्दा पुरानो इन्टरनेट संस्करणको लागि यात्रा, छुट्टि, सबै प्रकारका यात्रा र यात्राको लागि आवश्यक जानकारीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। साइटमा सेक्सनहरूमा जानकारी छ: शहरहरू, शहरहरू, समुद्री किनारहरू, दूतावासहरू, लौतम, सनस, सौकीहरू, सौकीहरू, सौनालीहरू, सौनालीहरू, सौनाकहरू र अधिक अधिक। अधिक स्पष्ट
होटेल र होटेल होटल तपाई शहरमा आउने उद्देश्यले छान्नुपर्दछ। जसले सबै सांस्कृतिक ठाउँहरूको मूल्यांकन गर्न चाहन्छन्, सहकर्मीका साथ व्यापार प्रश्नहरूको समाधान र करोडपति शहरको इतिहासलाई अन्वेषण गर्छन्, यो केन्द्रमा होटललाई ध्यान दिन लायक छ। तिनीहरू नदीको किनारमा राखिन्छन्, र योबाट टाढा। संख्याको लागि मूल्यहरू विन्डोबाट दृश्यमा मात्र मात्र निर्भर गर्दछ, तर स्तरमा पनि। नियमको रूपमा, कारासोनाकार्कमा साधारण होटल र होटलहरूसमेतका कर्मचारीहरूले सेवाहरूको एक मानक सेटको प्रस्ताव राखेका छन्:
प्राकृतिक सुन्दरताको मजा लिन चाहानुहुन्छ, तपाईंलाई शहर बाहिरका क्रोसोसोर्साकको रूपमा होटल वा होटेल चाहिन्छ। धेरै वस्तुहरू येनसेई नदीको किनारमा अवस्थित छन्।
यदि तपाईंले होटल कोठा वा क्रान्सोनाक होटल भाडामा लिनु पर्छ भने, र तपाइँसँग मध्यस्थता गर्न को लागी अधिक क्षमता छैन, हाम्रो कौशल प्रस्तावहरु प्रयोग गर्न को लागी। प्रत्येक वस्तु कार्डमा विभिन्न कोणबाट केवल वर्णन र फोटोग्राफहरू होइन, तर सही ठेगानाहरू र फोन नम्बरहरूको साथ सबै होटल र होटेलहरूको नक्शा पनि। फन्डेलरबिना तपाईंको वा व्यापार यात्रा बनाउन कोठाको अग्रिम र बुकिंग हुनु अघि फोनबाट सबै प्रश्नहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस्!
<< p> दैनिक, क्षेत्रीय केन्द्रले विभिन्न संख्यामा पाहुनाहरूलाई विभिन्न यातायातमा पुर्याउँछ। यात्रुहरूको एक अंश ट्रेनहरूमा आइपुग्छ, र रेलवे स्टेशनको नजिकको होटलहरू र होटलमा बसोबास गर्ने प्रयास गर्दछ। ट्रेन स्टेशनबाट टाढा छैन जब तपाईं कुनै खास श्रेणीका लागि विभिन्न कोटीहरूको होटलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। सान्त्वनाको स्तर जस्तोसुकै भए पनि सर्तहरूले पाहुनाहरू आराम गर्न सर्तहरू सिर्जना गरेको छ। रेलवे स्टेशनको बारेमा krasnoearsksk मा होटेल र होटेलहरूको कोठाहरू उपलब्ध छन्: